ဒီနေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့ သားငယ်ရဲ့ “လမ်းကလေး” – Cele Channel
ဒီနေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့ သားငယ်ရဲ့ “လမ်းကလေး”
Posted on February 2, 2018 Author Myo Min Htet	Comment(0)
MOON MYANMAR MEDIA ကနေ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဖြန့်ချိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲရဲ့ Winner တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သားငယ်ရဲ့ ပထမဆုံး တစ်ကိုယ်တော်အခွေကတော့ ဒီနေ့(ဖေဖော်ဝါရီ ၂ရက်)မှာထွက်ရှိလို့ လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကို အသစ်အသစ်တွေ ချပြချင်တဲ့ သားငယ်ရဲ့ ဆန္ဒကြောင့်အခွေကိုလည်း မြန်မြန်ထွက်စေချင်ခဲ့တဲ့ သားငယ်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒလည်း ပြည့်ဝသွားခဲ့ပါပြီ။
သားငယ်ရဲ့ လမ်းကလေးဆိုတဲ့ ပထမဆုံး တစ်ကိုယ်တော်အခွေကိုတော့ Moon Myanmar Media ကနေ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဖြန့်ချိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရမ်းကြိုက်တဲ့ တေးရေးဆရာတွေက ရေးပေးထားတဲ့ သီချင်းတွေလည်း ပါဝင်ပြီး ပရိသတ်အကြိုက်နဲ့ သားငယ်အကြိုက် ထပ်တူကျရင်တော့ ထူးခြားသွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
” သီချင်းကတော့ ကျွန်တော်ရေးတာမပါဘူး ကျွန်တော်သိပ်မရေးတတ်ဘူး။ သီချင်းတွေကလည်း တီးထား၊ ဆိုထားတာ ၁၄ ပုဒ်လောက်ရှိတယ်။ အဲ့ဒီထဲကနေပြန်ရွေးရမယ်ဆိုတော့ တေးရေးအနေ နဲ့ ကိုအောင်ကိုမြင့်၊ ကိုလင်းလင်း၊ ကိုညီမင်းခိုင် တို့ ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်ရတဲ့သူတွေပဲ လေ၊ ပြီးတော့ ကိုသာဒီးလူတို့လည်းပါမယ်ပေါ့။ ထူးခြားတာ မထူးခြားတာကတော့ နားထောင်တဲ့သူတွေရဲ့ နားထဲမှာ ချိုချိုဝင်မလား ကန့်လန့် ဝင်မလား အကဲဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကြိုက်တာ ကျွန်တော်ကြိုက်တာ ထပ်တူကျရင်တော့ သူတို့နားထဲမှာ ထူးခြား သွားနိုင်တာပေါ့” လို့ သားငယ်ကပြောပါတယ်။
ပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော်အခွေအတွက် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကိုလည်း နားထောင်ချင်သလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သုံးသပ်တာ မျိုးတွေရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
” ပရိသတ်ရဲ့ Feedback ကိုလည်း နားထောင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း Feedback ပြန်ပေးပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း အသစ်ကို တော်တော် နားထောင်ချင်နေပြီ ဒါဟာသဘာဝပဲ အသစ်တွေ နားထောင်ချင်လို့လည်း ကျွန်တော့်ကို အချိန်ကုန်ခံ၊ ငွေကုန်ခံ၊ လင်မယားတွေ စကားများကြပြီး ကျွန်တော့်ကို Vote ပေးခဲ့ရတာလေ။ တစ်ခါလာလည်း ပြိုင်ပွဲ တုန်းက သီချင်းတွေပဲဆိုရင် ငြီးငွေ့လာမယ် လို့ထင်တယ်၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အသစ် အသစ်တွေ လုပ်ပြချင်တယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
အဆိုတော် သားငယ်ကိုတော့ Myanmar idol Season2ကနေ ပရိသတ်အားပေးမှုအများကြီးရရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Photo : ပိုးမီ FB
Posted on January 28, 2018 Author Myo Min Htet
နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့သမီးလေးကတော့ ဖခင်ဖြစ်သူအတွက်ကို အားပေးစကားပြောလာပါတယ်။ အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးတို့ရဲ့ မိသားစုဟာ အေးစက်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ရောက်နေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်ပိုင်းက ထက်ထက်မိုးဦးတစ်ယောက် သာသနာ့ဘောင်ကို ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ သမီးဖြစ်သူတို့နဲ့ အဆက်အဆံမရှိဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပြီး သူတို့ရဲ့ မိသားစုဆက်ဆံရေး တစ်ခုခုဖြစ်နေတာကို ပရိတ်သတ်တွေ သတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။ သာသာနာ့ဘောင်မှာ ပျော်သလောက် နေသွားတော့မယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ ဆရာလေးထက်ထက်မိုးဦးတစ်ယောက်ကတော့ ခုချိန်ထိ တောင်ကြီးမှာ သီလရှင်ဝတ်ဘဝနဲ့ ပျော်နေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကတော့ အင်တာဗျူး ဗွီဒီယိုဖိုင်တစ်ခု ဖေ့စ်ဘွက်ပေါ်တက်လာခဲ့ပြီး ယင်းထဲမှာ ဆရာလေးဟာ ငိုနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ထိုနောက်မှာပဲ သမီးဖြစ်သူ စစ်လွန်းဝတီထက်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ မီကျောင်းမျက်ရည် ကျပြတယ် ဆိုတဲ့ စာသားပါ ပို့စ်တစ်ခုကို ရေးသားလာပါတယ်။ […]
Kim ရဲ့တင်ပါး အခြားသူများထက်ပိုကြီးနေရခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်
Posted on December 24, 2017 Author Cele
Kim Kardashian ဆိုတဲ့နာမည်ကို ကြားလိုက်တာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ တင် ပါး အလှတို့ကို ပြေးမြင်မိကြမှာပါ။သူမကို မြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ လူတိုင်း သ တိထားမိတဲ့ နေရာကလည်း သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပါ။Kim ဟာနာမည်ကျော် American reality television personality စတားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အသက်ကတော့ (၃၆)နှစ်ပါ။ Kim ရဲ့ တင်ပါးSize ကိုအားလုံးက ခန့်မှန်းရင်တော့ အမြဲလွဲလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ့်ကတော့ သူမရဲ့ တင်ပါးSize ဟာ လူတွေထင်ထားသလောက်တော့ မကြီးပဲ တကယ့်ရှိရင်းစွဲ Size ထက်ပိုပြီး ကြီးနေသယောင်ထင်နေရ တာ ပါ။ဘာကြောင့် ပိုကြီးနေတယ်လို့ ထင်ရတာလဲ ဆိုတာကတော့ သူမရဲ့ အရပ်ကြောင့်ပါ။သူမရဲ့ အရပ်ဟာ(၅)ပေ(၃)လက်မသာရှိပါ တယ်။မြန် မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဒီအရပ်ဟာ ပုတဲ့ အထဲမှာ မပါပေမယ့်၊သူတို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ […]
Posted on February 3, 2018 February 3, 2018 Author Myo Min Htet
ယောက်ျားတွေက ပြောတယ် မင်းတို့မိန်းမတွေက ငွေမက်တယ်တဲ့ ဟုတ်တယ်လေ။ အဲဒီ ငွေမရှိဘဲ ကျောတစ်ခင်းစာ နေရာ ရနိုင်ပါသလား ? အဲဒီ ငွေမရှိဘဲ လူကြားထဲ ၀င်ဆန့်လို့ ရသလား ? ရှင်တို့လည်း သူတောင်းစားကိုတော့ ရည်စားတော်ချင်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ မိန်းမအဖြစ် ယူချင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ရှင်တို့ကတော့ ငွေမမက်လို့လား ? ရှင်တို့က ပိုဆိုးပါတယ် ။ ငွေလည်း မက်တယ် လှတာလည်း မက်တယ် ကိတ်တာလည်း မက်တယ် သာယာမှုလည်း မက်တယ် ။ သေချာတွေးကြည့် ကျွန်မတို့ မိန်းမတွေက ကိုယ့်ချစ်သူ ဗိုက်ပူပြီး အသားမည်းသွား ရုပ်ဆိုးသွားလည်း ချစ်နိုင်ပေမယ့် ရှင်တို့ယောက်ျားတွေက လှသထက် လှတာမြင်ရင်အိမ်က ဟာကြီးကို ပြန်အမ်းချင်ပါတယ် […]
UAE နိုင်ငံကို အလုပ်သွားလုပ်ပြီးလို့ မြန်မာနိုင်ငံကို အပြီးပြန်တော့မယ့် အချိန်မှာ လက်ထဲမှာ ငွေ သိန်း၂၀ပဲ ရှိတာနဲ့…
ဘောလုံးသမားတွေကို ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ Sexy Performance လုပ်ပြခဲ့တဲ့ဗီယမ်နမ်လေကြောင်းလိုင်း